Samsung Nnyocha Chọta Batrị Ga-Culprit Na Galaxy Cheta 7 Ọkụ | Gam akporosis
Samsung nyocha kwubiri batrị ụta maka ọkụ nke Galaxy Note 7
Dị ka ụlọ ọrụ mgbasa ozi Reuters si kwuo, nyocha e mere na Samsung na-eme iji dokwuo anya ihe butere ọkụ nke Galaxy Note 7 ya emechiela. Dabere na ụlọ ọrụ ahụ, nyocha Samsung mechara na ihe anyị niile "maara" ugbua, gụnyere ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya: batrị bụ isi ihe kpatara ọkụ. N'ezie, n'oge ncheta mbụ nke Galaxy Note 7 ụlọ ọrụ ahụ ekwuolarị na nsogbu dị na batrị nke smartphones.
Agencylọ ọrụ Reuters na-ekwu na Samsung kwupụtara nsonaazụ nke nyocha ya na Jenụwarị 23, dị nnọọ ụbọchị ozugbo tupu ọkwa nke ego nke anọ ya. Tinyere nke a, ụlọ ọrụ South Korea ga-ekwupụtakwa usoro ọhụrụ nke etinyegoro ugbua iji gbochie ụdị ihe ahụ ime ọzọ.
Dị ka onye na-amaghị aha nyere ihe bipụtara ozi site Reuters, Samsung emeela ule dị iche iche nke enwewo ike ịmeghachi ọkụ ndị ahụ, Ọ bụ ezie na enweghị ike ịkọwa ihe kpatara ha site na nsogbu metụtara ngwanrọ ma ọ bụ ngwaike.
N’ụzọ doro anya, ndị ọchụnta ego na ndị nyocha nke ụlọ ọrụ ahụ kwenyere na etu o siri dị Samsung mkpa inye nkọwa doro anya na ihe kpatara nsogbu nke Galaxy Note 7 smartphones, yana usoro ọ ga - eme gbochie nsogbu ndị ahụ ịghaghachi.
Cheta na ewepụrụ Samsung Galaxy Note 7 na ụbọchị ahịa mgbe ebidochara ya na mba iri na abụọ n'ihi mgbawa na ọkụ nke mere na ngwaọrụ ụfọdụ. Mgbe usoro mmejuputa nke ahụ, agbanyeghị, ka na-aga n'ihu, nsogbu ahụ megharịrị ka imepupụta ihe ya mechara mebie ụlọ ọrụ ahụ mebiri akụ na ụba na onyonyo.
Nkpughe nke batrị bụ onye kpatara ya abụghị ihe ọhụụ, mana ọ na - akwado ihe kpatara ya ma na - ekpochapụ obi abụọ site na ịkọwapụta nke ahụ nsogbu ahụ abụghị n'ihi ngwanrọ ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung nyocha kwubiri batrị ụta maka ọkụ nke Galaxy Note 7
LG G6 ga - eji teknụzụ ọhụụ gbochie ọnụ na - ekpo oke ọkụ
Samurai Saga bụ Arcade platformer nke na-aga na breakneck ọsọ